geedi socodka soojiidashada sare ee qaybaha birta iyo naxaasta ah
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka / Nidaamka alxanka birta iyo naxaasta
soojiidashada qaybaha iibinta biraha iyo naxaas ahaanta
Categories: Codsiyada, Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka Tags: naxaasta dhaadheer oo badan, farsamada sare ee farsamada, ciriirinta induction, naxaas jarista, geedi socodka kaluumeysiga induction, Meelaynta, naxaas jarjaran, steel steel, iibinta birta iyo naxaasta
Warshadaha: Soo-Saarida Askareynta Askarta
Qalabka: DW-UHF-6KW gacanta ku haynta kululeeyaha kululeeyaha
Qalabka Tijaabada 1: Koofiyad bir ah
Qalabka Tijaabada 2: Birta furan
Heerkulka: 800 oF (426 ° C)
Time: 3-4 sekan.
Qaybaha waxaa loo isticmaalaa nidaamyada xakameynta heerka dareeraha.
Tallaabooyinka geeddi-socodka ee Imtixaanka 1:
Marka hore, iibiyaha horay loo sameeyay ayaa waxaa la gelinayaa dibnaha bustaha shaqada. Kadib, daboolka ayaa lagu daray. Awoodda korantada - waxaa loo dejiyay 3 ilbidhiqsi. Habka iibinta ayaa la dhameystiray.
Tallaabooyinka geeddi-socodka ee Imtixaanka 2:
Mar labaad, iibiyaha foomka hore ayaa la dhigayaa hareeraha sare ee dibedda shaqada. Xargaha loo iibin doono ayaa lagu darayaa goobta shaqada. Jadwalka korantada ayaa loo qorsheeyay 4 ilbidhiqsi. Geedi socodka kaluumeysiga la galida wuxuu ku dhamaaday waqtigii loo qabtay. Iibiyaha xad-dhaafka ah waa la nadiifiyaa.
Faashad qeybo ka mid ah Qeybo ka mid ah tuubbada bir-qabashada ee birta aan xirneyn
Mashiinka dhoobada kulaylka badan